As Zimbabwe heads to the polls - The Zimbabwean
As Zimbabwe heads to the polls
UK aid agency, CAFOD, joins in the call for peaceful and fair elections
In a recent statement from the Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference, the Bishops expressed their hopes for the future of the country:
“We believe, we hope, and we pray, that the coming elections will be such a moment for us all. Genuinely free and fair elections will return us to constitutionality and the ‘will of the people’…”
In the statement, the Bishops said that the elections were an opportunity for ‘opening the door to a new Zimbabwe’ – where politics is ‘collaborative and inclusive’ and not based on one or two ‘charismatic leaders’.
The Bishops called on Zimbabweans to put any ‘fear and disillusionment of previous elections behind them’, and to prepare for a future society Zimbabweans want to see.
The Zimbabwe Catholic Commission for Justice and Peace will be fielding 700 observers around the country. The observers will be visible, wearing ‘I am a Catholic observer’ t-shirts, and will be supported by roving supervisors, mainly priests, who will attend to any issues raised as well as collect the observation forms for entry at each diocesan control room which will report into the national situation room on a regular basis.
CAFOD’s Dadirai Chikwengo concluded:
“The world is watching these elections and we hope and pray that regardless of who wins, Zimbabwe’s road ahead is one to a prosperous, peaceful and democratic future.”